Ampidino Abyssrium World APK ho an'ny Android
Ampidino Abyssrium World
Ampidino Abyssrium World,
Tombontsoa sy tontolo iainana amoron-dranomasina tsara tarehy miandry anao eo ambaninny onja ao aminny Tontolo Abyssrium vaovao. Manitatra mahita faritra vaovao, samy manana lohahevitra tsy manam-paharoa, miaraka aminny loko misy ny mason-tsivana sy ny maodely malalaka. Mampiasà haran-dranomasina sy ahidrano miaraka aminny haingon-trano manokana hamoronana ranomasina majika anao manokana.
Karakarao ny zanatany izay mamokatra mibontsina aminny rivotra sy mampitombo ny fahadiovana mba hahafahanny hazandranonao miaina anaty ranomasina madio. Raha manamboatra toerana madio sy tsara ipetrahanny trondro ianao, dia hitsidika ny karazana trondro samihafa. Makà namana trondro mahafatifaty izay hividy entana ho anao ao aminny Abyssrium World.
Soraty ny lalao aminny namanao hitsidihanao tontolo anaty rano. Asehoy ny namanao ny fomba nandravahanao ny tontolonny ranomasinao. Aza adino ny mampiasa ny maody nomerika hijerena ny gorodonao tsara tarehy sy ireo sakaizanao trondro. Mamorona ranomasina tsy manam-paharoa feno haran-dranomasina tsara tarehy sy karazan-dranomasina samy hafa!
Abyssrium World Specs